<º Gamers: Damn Castilla hadda waxaa loo heli karaa GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
<º Gamers: Damn Castilla hadda waxaa loo heli karaa GNU / Linux
Maanta war uma keenayo, laakiin waa war, ugu dambeyntiina hadda waxaa loo heli karaa GNU / Linux mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan Locomalito iyo mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la filayo in la dejiyo (ugu yaraan Elav iyo aniga): Damn Castilla.
Ciyaartan waxaan qaadan doonaa doorka Don Ramiro, oo hadafkeedu yahay ciribtirka jiniyada aafada leh Tolomera oo sidaas ku badbaadi Boqortooyada Castile.
Ciyaartu waxay xushmeyneysaa ciyaarihii hore ee arcade, oo ah wax laga arki karo shaxanka iyo codka labadaba Gryzor 87 ku dayday jabkii YAMAHA YM2203, oo si ballaadhan loogu isticmaalay arcadadii 90-naadkii, isla markaana xusuusinaysa khuraafaadkii Ghost'n'Goblins.
Waxaan wajaheynaa ciyaar aad u weyn oo ay tahay inaan la seegin.
Waxaan idinkaga tegayaa soo bandhigida muuqaalka ciyaarta.
Sida caadiga ah aniga ahaan, waad rakibi kartaa ciyaarta AUR xirmo damn-castile
Cusbooneysiin: Si aad u ciyaarto waa inaad xirmooyinka soo socda rakibtaa:
furan, zlib, Mesa y openssl.
Haddii aad isticmaasho qaybinta gelinno 64 waxaad u baahan doontaa inaad rakibto noocyo 32-bit ah (badanaa waxay ku bilaabaan lib32). Tani waa inay ku filnaataa tan iyo markii ay rakibi doonaan ku-tiirsanaanta kale ee daruuriga ah.
Waxaan sidoo kale cusbooneysiiyay xirmada AUR.
Bogga rasmiga ah ee ciyaarta
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » <º Gamers: Damn Castilla hadda waxaa loo heli karaa GNU / Linux
Oo sideen ku helaa ciyaarta? runti sifiican ayey umuuqataa.
Waxay umuuqataa mid xiiso leh waxaan kusii wadaa inaan soo dejiyo.
Ogaysiis !! Waxaan si ba'an u sugayay nooca Linux ee ciyaartan. Shaki la'aan, mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan Locomalito.
Waxay umuuqataa madadaalo, aad ayaad u mahadsantahay! Waan arki doonaa haddii ay Ubuntu tahay
In kasta oo ciyaartu u muuqato mid wanaagsan iyo wax walba, shaqsiyan aniga waxay ila tahay nuqul ka mid ah 'Castlevania 2D' marka loo eego ciyaarta.
Ciyaaraha leh makaanikada la midka ah Metroid iyo Castlevania waxay ku dhexjiraan nooca loo yaqaan Metroidvenia, iyo taariikhda gaaban ee ciyaaraha fiidiyowga waxay cabi jireen labada kulanba, runti aniga qudhaydu waxaan sameynayaa ciyaar toos uga soo socota Metroid (taas oo Halkan ka hadli maayo tan iyo markii loo sii dayn doono ZX Spectrum)
Hagaag, faahfaahintaas waa la cafiyey, maadaama ay hada aad u adagtahay in la helo ROM-ka loo yaqaan 'Castlevania ROM' oo aad awood u yeelatid inaad kula ciyaarto PS2-gaaga iyo / ama PSP sidii Eebbe ugu talo galay.
Waad ciyaari kartaa kuwa Super Nintendo iyo DS ... Waxaan la ciyaarayaa Castlevania IV oo leh Snes9X-GTK iyo sawirka sawirka 'Ruin' oo leh $ $ GBA iyada oo loo marayo Wine (emulator-kan Linux wuxuu sameeyaa wax weyn, ma ahan sida Desmume oo kale in loogu talagalay Linux waa wax laga naxo).
Waayahay Ugu yaraan waxaan haystaa CD1-keyga oo ay ku jiraan inta badan ciyaaraha NES ee lagu ciyaarayo labada PS1 iyo PS2.
Waad ku mahadsantahay caarada, wax fikrad ah kama aan ka haynin taas ... Long live Super Metroid!
Waxay umuuqataa mid aad ufiican, horeyba waan uwaayay nooc kamid ah ciyaarta iskuulkaas gaboobay ee GNU / Linux :).
Hal su'aal: ma jirtaa hab lagu qaabeeyo xakamaynta ciyaarta iyo furayaasha? Waxaan isticmaalaa kumbuyuutarka 'Dvorak', tan iyo markii ciyaarta loo diyaariyey furayaasha booska Qwerty, sidoo kale lama ciyaari karo. Iyo maadaama aysan cadeyn kontaroolada meel kasta oo ciyaarta ka mid ah, waxaa igu adkaatay inaan helo furayaasha ay adeegsato.
Maxay Ciyaaraha Locomalito ugu aheyn Steam?
Hagaag fiiri, waxaan u maleynayaa inaan weydiin doono.
Waxaan ku rakibey os-keyga dugsiga hoose waana ciyaar aad u qabad badan: 3
Haddii aan u ciyaaray Ghost'n'Goblins sidii ilmo, waa maxay ciyaar weyn, waad ku mahadsan tahay caarada, hubaal tani way fiicnaan doontaa.
Ku jawaab jomada
Waan soo dajiyay, laakiin ma awoodin inaan ku ciyaaro fedora 19. Waxay weydiisataa libssl.so.1.0.0, sikastaba waxaan hayaa xirmooyinka furfuran iyo libopenssl.
Ma jiraa qof yaqaan sida loo saxo?
Marka hore, Mahadsanid !!
xiiso leh laakiin aad ugu eg tan http://linux-os.net/gamers-maldita-castilla-ya-disponible-para-gnulinux/
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo maamulo, u soo dejiso nooca loo yaqaan 'Linux' waa la fulin karaa laakiin waxba ma furi doono
Baasto nuqul ah oo uu sameeyay Son-Link, isagoo qiraya asalka. Sikastaba, maqaalka waa isaga asaga iyo waxyaabaha kujira balooggan wuxuu hoostagaa Creative-Commons.
Fadlan, intaadan dhaliilin ka hor, sifiican wax u eeg.
Gelitaanka boggaas kale waa nuqul nuqul ah <b> THIS </b> maqaalka, oo sidoo kale sheegaya asalka asalka ah.
By the way, haddii ku tiirsanaanta la la'yahay, kaliya xalay ka hor intaanan seexan mid baan u sheegay oo ku saabsan waana inaad ku rakibtaa fur.
Kadib waxaan cusbooneysiiyaa galka iyo xirmada AUR, oo aanan guriga kujirin.
Nacalad, dejinta ciyaaraha Locomalito ayaa sii socota! Waxaa la joogaa waqtigii la qaadan lahaa Damn Castilla oo aan wakhti fiican kula qaatay daaqadaha, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad dhameyso Hydora oo aan ku farxi doono! Waad ku mahadsantahay wararka Son Link
Waxaa jira mid u qaadaya inuu faallo ka bixiyo qodob kale, laakiin wax horumar ahi ma jirin.
Son Link in arch ciyaarta ma bilaabayo, waxay ku weydiisaneysaa ku tiirsanaan, laakiin lagama helo keydadka (waxay umuuqataa in midka jira nooc yar)
Sidee ayaynu u ciyaarnaa?
Dhibaato yar ayaa i haysata, waxaan ku rakibay Manjaro illaa Yaourt, si fiican ayey u rakibtay, laakiin, waxaan aadayaa ciyaaraha, waxaan dhagsiiyey Maldita castilla, mana furmayo. xal kasta? mahadsanid.
Ku jawaab Ayo
Waxaan u jiidayaa Virtualbox si aan u arko waxa dhici kara, haddii ku tiirsanaan badan la waayo.
Isla marka aan ogaadaa waxaan cusbooneysiiyaa gelitaanka.
Waxba, waxaan rakibaa Openal iyo waxba, ciyaarta wali ma furi doonto. Waa inaan is dhiibo oo aan sii joogo anigoon ciyaarin ciyaartan weyn 🙁
Maaha wax aan jirin laakiin ciyaartan waa mid gabowday.
Haa .. laakiin waxaa jira dad jecel noocyada noocan ah, ciyaaraha retro. ^^
Moodhadhka hadda jira ayaa ah inuu kaa qaado adiga oo dhex duulaya goobo cajaa'ib leh oo ka dhigaya mid caadi ah "Game Over" mid aan macquul ahayn.
Adiguna waad aadeysaa oo aad rumeysan tahay, ciyaaraha leh dhadhan duug ah (aka Retro) ayaa ka mood badan sidii hore, dhab ahaan, booqo Greenlight on Steam waxaadna arki doontaa ciyaaro la mid ah laadadka.
Horaan iskudayay, waa wax fiican… waxay soo celinaysaa xusuus badan, muusiguna runtii wuu adagyahay!
Ma jiraa qof og haddii ay suurtagal tahay in ciyaarta la badbaadiyo?
Waxaan tuurayaa qalad furan mana haysto cod, waxaan ka isticmaalayaa aur, waxaanan isticmaalaa garaaca wadnaha, xal kasta?
Khalad furan: 40964 (Bilowga Audio_Tick)
Ku jawaab Saeron
Waxaan isticmaalaa garaaca wadnaha wax dhibaato ahna ma qabo.
Waan baadi goobay isla markaana kulankaan 'Game Maker Studio Studio' ayaa wuxuu leeyahay mid baan ku xalliyaa anigoo codka dib u habeyn ku sameynaya, marka ciyaarta bilow, riix F11 si aad u yareeyso shaashadda oo aad u furto pavucontrol (haddii aadan ku rakibneyn, rakibin) oo aan codka u habeeyo
Haddii aan haysto xakamaynta mugga, laakiin ma helayo wax xun oo nacasnimo ah, haddii aad i dhaafin karto xiriirka goleha ay iga caawin karaan. Uma maleynayo inay tahay sababta oo ah waxaan isticmaalaa kde.
Mawduucu waa tan, laakiin wuxuu ku qoran yahay Ingiriis: http://gmc.yoyogames.com/index.php?showtopic=591293
Nasiib darro duntaani waa mid loogu talagalay daaqadaha mana ahan Linux, sidaa darteed waxaan sugayaa dhawaqa
Ku jawaab saron
Qof ayaa ii sheega sida loo rakibo, maxaa yeelay markaan ka soo dejisto bogga wuxuu i siiyaa feyl .tgz oo waxaan ku rakibaa shisheeyaha si fiican ayeyna u rakibtaa laakiin meelna kama furi karo, mana fahmin taas oo ku saabsan aur, fadlan qof ii sharrax, aniga ayaa cusub
Kaliya fidi faylkaas meel uun laba jeer guji faylka orodka (hubi ka hor inta uusan fulin rukhsadaha)
Baro sida saxda ah ee loo aqoonsado qoraalka ku jira sawir leh tesseract iyo ocrfeeder.
Mozilla waxay shaqaaleysiisay Christopher Montgomery inay ka shaqeyso koodhadhka Daala